Email Apocalypses. Zava-misy tsy mampino, sa fitaka fohy? & Ndash; Valio amin'ny Semalt
Email Apocalypses. Zava-misy tsy mampino, sa fitaka fohy? - Valio amin'ny Semalt
Niresaka momba ny fomba hanafoanana ny zombies na ny spam i Lisa Mitchell, mpitantana ny fahombiazan'ny mpanjifa , rehefa avy nahazo mailaka. Miresaka momba ny fanadiovana ny rafi-java-tsarobidy koa izy. Mandritra izany fotoana izany, tokony hitadidy fa ny ZombieAlert dia afaka manamboatra na manova ny hafatra nalefan'i SophosLabs.
Fantaro ny adiresy IP an'ny ordinatera Zombie
Ny dingana voalohany dia ny mamantatra ireo adiresy IP an'ny ordinatera zombies mba hahafahanao manakana azy ireo mora foana. Rehefa nahazo ny mailaka mailaka ianao dia tokony hijery hoe iza ny tambajotra na adiresy IP no tonga avy amin'ny mailaka. Zava-dehibe ny manakana ny adiresy IP raha vao haingana, ary tsy maintsy mijery ireo rindrankajy, ireo fitaovana mainty sy ireo fitaovana entin-kaonty mety hitranga. Aorian'izay dia azonao atao ny mametaka ny adiresy ivelany mankany amin'ny adiresy anatiny. Raha misy adiresy IP ao amin'ny rafitra misy anao, dia tsy maintsy manakana azy io ianao, ary tsy maintsy averinao jerena ny fitaovana ampiasain'ny tambajotra alohan'ny hanaovana azy.
Fantaro ny ordinatera
Raha vao fantatrao tsara ny adiresy anatiny, ny dingana manaraka dia ny fampiasanao ny loharanonao mba hahitana ny solosaina sy ny toerana misy azy. Ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hikarakarana ny solosaina dia ny fampiasana ny tambajotran'ny fifandraisana. Ny ankamaroan'ny fikambanana dia mampiasa fomba isan-karazany mba hahafantarana ny toerana misy ny solosaina findainy sy ny fomba ampiasan'ireo rafitra ireo amin'ny asa isan-karazany.
Diovy ny ordinatera afafy
Raha vao fantatrao ny adiresy IP sy ny toerana misy ny ordinatera, ny dingana manaraka dia ny fanadiovana ny fitaovana elektronika voakasik'izany..Noho izany, azonao atao ny mametraka ny rindrambaiko Sophos Antivirus ary manadihady tsara ny fitaovana ampiasainao. Raha toa ianao ka nahomby tamin'ny fametrahana SAV ary famoahana vaovao, tokony esorina ny solosainao amin'ny aterineto ary hamaha ny scan tanteraka. Omeo minitra vitsy alohan'ny hanombohana sy hifandray amin'ny aterineto.
Zava-dehibe ny manamarika fa tokony esorina ny solosainao avy amin'ny tambajotra rehetra ary avelao izy io amin'io endritsoratra io raha tsy efa nodinihanao ilay fitaovana. Manadio ny fandrahonana rehetra ary hamita ny dingana fahaefatra sy fahadimy alohan'ny fifandraisana amin'ny aterineto.
Manaraha maso ireo ordinatera aorian'ny fanadiovana
Zava-dehibe ny mamorona ny rakitrao ary manala ireo rakitra tsy ilaina amin'ny fanadiovana mety. Raha voahidy ny rafitry ny ordinateranao, dia afaka manara-maso tsara azy ianao ary manova ny fanovana azy. Ny rakitra rehetra izay miteraka ny olana dia tokony alaina na afahana avy hatrany.
Jereo ny rafitra alohan'ny hidirana amin'ny Internet
Raha efa nametraka ny programa Sophos antivirus ianao, dia hanamarina ny fitaovana ampiasainao amin'ny mety ho fisorohana viriosy sy malware. Ny fandaharam-pampianarana dia tokony havaozina ara-potoana mba hahafahanao mankafy ny soa rehetra. Raha toa ka tsy misy ny SAV, dia tokony haka azy amin'ny tranonkala azo itokisana ianao ary hametraka izany haingana araka izay tratra.
Jereo raha efa misy ny solosaina finday sy ny rakitra hafa ary manaraka ny fenitry ny Windows Security Patches. Azonao atao ny mamaky ireo lahatsoratra avy amin'ny Microsoft Baseline Analyzer mba hahafantarana ny fomba hanafoanana ireo zombies amin'ny ordinatera.
Manara-maso ny asa atao ratsy
Raha vao mifandray amin'ny Internet ianao aorian'ny fanandramana araka ny tokony ho izy, dia tokony hanara-maso ny fitaovana ho an'ny asa ratsy. Jereo tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny tambajotra sy ny rakitra rehetra. Raha sendra olana ianao dia tokony hifandray amin'ny ekipa teknolojia mpanohana an'i Sophos ary manaraka akaiky ny toromariny Source .